420s Zaytoven &amp; Quavo တို့သည်ခြေထောက်™ပြိုင်ပွဲအားဖြင့် Genius x Fruit ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူစတူဒီယိုကိုနှိပ်ပါ။ images and subtitles
Yo ဘာဖြစ်တာလဲ Zaytoven ပါ။ Fruit By ရဲ့အနိုင်ရသူနဲ့တွေ့ဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာပါ အဆိုပါ Foot နှင့် Genius စတူဒီယို Sessions ပြိုင်ပွဲ။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှထုတ်လုပ်သူများ အဆိုပါခြေဖြင့်ရေစာများအားဖြင့်အသီးအားဖြင့်မှုတ်သွင်းအသံကိုအသုံးပြု။ စည်းချက်တင်ပြခဲ့သည်။ သွားကြရအောင် စုံစမ်းသည်။ Masta Pharaoh ။ လူဘယ်လိုနေသလဲ ငါ Denver မှကိုလိုရာဒိုမှဖြစ်ပြီးမွေးဖွားကြီးပြင်းသည်။ ဂီတမြင်ကွင်းကဘာလဲ Denver မှာ? ယင်း တော်တော်လေးသေးငယ်တယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုအများကြီးကျိန်းသေရှိတယ်။ ဒီတော့ဘာကြောင့်ဝင်ခဲ့တာလဲ အဆိုပါ Foot စတူဒီယို Sessions အားဖြင့်အသီး။ ငါစည်းချက်ပြီးသားလုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ငါသာဒါကိုခံစားရတယ် နင်မသိဘူးဆိုရင်မင်းကိုထိန်းထားပေးမယ် အခွင့်အလမ်းများ။ အထက်တန်းကျောင်းတက်နေစဉ်တွင်သင်သူငယ်ချင်းများနှင့်အရာအားလုံးရရှိခဲ့သည် သူတို့ကဂီတကိုလုပ်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့လည်းတူတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သငျသညျထုတ်လုပ်ရန်မှတက်ကြည့်ရှုယောက်ျားတွေ၏? ငါဒေါက်တာ Dre သင်နံပါတ်တစ်ဖြစ်ကောင်းပြောနိုင်ပါတယ် ဒါပေါ့။ မဟုတ်ပါ၊ မလုပ်ပါနှင့်၊ ဒါဖွင့်ပါတယ် Pharrell ။ ငါပြောတယ် Dre နှင့် Timbaland နှင့်အခြားအရာများသည်ကျွန်ုပ်နားထောင်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ Dre Dre နေ့ငါ Walkman မှာသူပြောနေတဲ့ငါ့ရဲ့ဝမ်းကွဲကိုသူသတိပေးလိုက်တယ်။ ငါကအသံ၏အကြောင်းရင်းရုံနားထောင်ခြင်းမှအရမ်းစွဲလမ်းခဲ့သည် နှင့်ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်ငါဒေါက်တာ Dre ကငါ့မျက်နှာသာကိုရပြီလို့ပြောနေတာကြောင့်ငါပါ ငါရက်ပ်ဂီတငါ့မိတ်ဆက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ ဒီတော့ဘာစတင်ခဲ့တာလဲ ကောင်းပြီငါပဲအားလုံးကွင်းကိုဖြတ်သန်းသွားနှင့် အရာအားလုံးပြီးတော့ပြီးတော့ငါတကယ်ကြိုက်တဲ့ဒီတွေ့ရှိခဲ့: အရသာရောနှော ကွင်းဆက်။ အဆိုပါရုတ်တရက်နှင့်သူကပဲငါ့ကိုမှခေါင်းညိတ်တယ်။ ထိုအခါငါတက်ဆောက်ငါတူညီသော tempo နှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုစောင့်ရှောက်။ အိုကေ ငါအဲဒီမှာကနေတည်ဆောက်ခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ အချို့သောလက်ခုပ်သံများနှင့်ထောင်ချောက်များနှင့်အရာအားလုံးပစ်ချ၏။ ဒီတော့ဒါရွေ့လျားနေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ငါအဲဒီမှာ ဦး ထုပ်တွေချလိုက်တယ်၊ မင်းကကန်ကန်တယ်၊ အရာအားလုံး။ ဒါကြောင့်သင်ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီပုံပြင်တွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင့်အတွက်ရုပ်ပုံကိုခြယ်သထားသလိုအဆင်ပြေပါတယ် တော်တော်များများပြီးပြီရိုက်နှက်။ yeah ကငါ့အဘို့အခါတိုင်းလုပ်ပါ။ ဟုတ်တယ် သူတို့ကိုသူတို့ထောင်ချောက်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါ၊ ဒါအခု။ ဒီနေရာကငါသိတဲ့အတိုင်းငါထင်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့ လူတိုင်းကအသံတစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးကြလိမ့်မယ်။ ငါရိုက်တဲ့ခလုတ်တွေကိုလုပ်ချင်တယ် သငျသညျတစျ ဦး လမ်းကြောင်းထဲမှာသုံးသီချင်းတွေကိုသိလို။ တစ်ခုမှာ ဒါကြောင့်ငါကပြောင်းလဲပစ်ရန်ငါသိ, သင်သိ, ငါ Berry Tie Dye ကွင်းဆက်ဖြင့်သွားခဲ့သည်။ ငါသိသောစည်းချက်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ငါလုပ်ပေးလိုက်သည်ကိုသင်သိသည် ခဲ့ငါသည်လည်းတက်ဆောက်။ ဟုတ်တယ် ဒြပ်စင်တွေအများကြီးမပြောင်းချင်ဘူး ဒါကြောင့်ငါဗုံသို့မဟုတ် 808 အဘယ်သူအားမျှမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးသို့မဟုတ်ငါပဲထား, တူသော nothin အတူတူနှင့်အတူရှိထဲမှာ။ တူညီတဲ့ဗုံ yeah ။ ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခု။ ဒါဟာ Masta Pharaoh တံဆိပ်မပါပဲ Masta ဖာရောကရိုက်နှက်တာမဟုတ်ဘူး။ သင် tag ကိုသွင်းရမည်။ မာတာကဘယ်သူလဲ သင်ဘယ်လိုတက်လာသလဲ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကတော့နောက်ဆုံးနဂါးဖြစ်သည်။ ငါလွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်ကနောက်ဆုံးနဂါးကိုကြည့် Iwas သွားတရားဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ဒါ ဘယ်သူလဲမာစတာ ဟုတ်ပါတယ် ဒါတော်တော်များများ။ ပြပါ ငါအခုသေချာပေါက်ဒီစည်းချက်ထွက်စစ်ဆေးချင်ထင်သူတစ် ဦး ဦး တယ်။ ငါက ငါ၏အ Bros တစ် ဦး ကိုခေါ်ပါ Huncho ကဘာလဲ? ဘာဖြစ်နေတာလဲ? သင်ဘယ်နေရာမှာလဲ? ကျွန်တော်စတူဒီယိုထဲမှာပါ မင်းသိတဲ့လူ၊ ငါကငါဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာရှိနေတယ်။ အိုကေ, ငါနိုင်သူလူ, Masta ဖာရောနှင့်ဒီမှာထိုင်နေသည်။ လူကဘာလဲ? ဘာလဲအစ်ကို? အဘယ်အရာကိုစီးတံတား? သူခက်သွားတယ် သင်ယခုခွေးကြီးတွေနှင့်အတူ။ လူကိုတန်ဖိုးထားပါ။ အဘယ်သူမျှမကသူပဲဒီစည်းချက်လုပ်, သင်တို့ကိုငါကထွက်စစ်ဆေးချင်တယ်။ တကယ်တော့ကိစ္စကမင်းကိုရက်ပ်လုပ်တဲ့အရာလိုပဲ။ ငါစတူဒီယိုထဲမှာကစားနေတယ်၊ ​​ငါနဲ့ကစားမနေပါနဲ့ အရမ်းခက်မယ်ဆိုရင် ကျိန်းသေအရူးသွား။ မခက်ဘူး ထိုအရာသည်ယဉ်ကျေးမှု (၃) ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတို့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါကအတူတူထားမယ့်။ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ အစစ်အမှန်အဘို့အ The Foot စတူဒီယို Sessions အားဖြင့်အသီးအနိုင်ရအပေါ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အဲဒါကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပါ။ ခွေးကြီးတွေနဲ့အတူနေတယ် ဆက်လုပ်ပါ။ အာရုံစိုက်ပါ။ ချက်ပြုတ်ထားပါ။ မင်းလမ်း Ight Quay အရူးတောင်မှအစစ်အမှန်မခံစားရဘူး ထုတ်လုပ်သူလုပ်ငန်းသည်သက်တမ်းရှည်စွာရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းကားအဘယ်နည်း။ အဖြစ် ထုတ်လုပ်သူမှထူးခြားသောအစွမ်းထက်သောအသံသည်အသက်ရှည်ခြင်းကိုဖန်တီးပေးသည်။ သင်သည်ဤအခန်း၊ ထုတ်လုပ်သူ ၁၀ ယောက်ကိုဤအခန်း၌စုစည်းပြီးသင်၏မျက်စိကိုပိတ်နိုင်သည် နှင့်ဤကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အတွက်စည်းချက်မှုစတင်သည်။ သူတို့က သင်ချက်ချင်း Zaytoven ရဲ့စည်းချက်လူကိုပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ် Zaytoven စည်းချက်များဖြစ်ကြသည်။ လူတွေကမေးတယ်။ Zaytoven ငါဘာလုပ်ရမလဲ ဂိမ်းထဲမှာကစားဖို့လား ငါလုပ်ရမယ့်အဆင့်တွေကဘာလဲဆိုတာမင်းသိတယ် မင်းအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဖို့လိုတယ် Gucci ပေါက်ကွဲမှုအတွက်မဟုတ်ခဲ့ရင် Zaytoven ဖြစ်ကောင်းဘာမျှမဆိုလိုဘူးသောအသံ။ သငျသညျတစျခုအနုပညာရှင်ရတစ်ချိန်ကဒီတော့ မင်းငါ့ကိုဓာတုဗေဒနဲ့အသံထွက်တယ်၊ မင်းတခါမှုတ်တာ၊ ကြောင်းအနုပညာရှင်ချွတ်ယူစတင်သည်။ တောင်မှအဲဒီအနုပညာရှင်လူသိများခံရဖို့သွားနေပါတယ် အချို့သောအသံသည်။ ခင်ဗျားဖန်တီးလိုက်တဲ့အသံဖြစ်လိမ့်မယ်။ မင်းကိုဘာကခုန်စေတာလဲ ဒီပရောဂျက်သည် The Foot Studio မှပြုလုပ်သောအစီအစဉ်များ? မင်းနဲ့တူငါအမြဲခံစားရတယ် ငါသိတယ်မင်းကတခြားထုတ်လုပ်သူတွေကမင်းကိုကြည့်တဲ့ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ် တက်ကြည့်လိုက်၊ ငါဟာလမ်းညွှန်ဆရာဖြစ်ချင်တယ်လိုခံစားရတယ်၊ မင်းငါဆိုလိုတာကိုမင်းသိတယ်၊ တက်နှင့်လာမည့်ထုတ်လုပ်သူများမှထောက်ခံမှုပြသပါ။ ငါဒီမှာလူလိုပဲငါဟာမင်းကိုသိတဲ့ငါဖြစ်ချင်တယ် သင့်ရဲ့ဂိမ်းထဲမှာလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေကိုကြီးမားတဲ့ bro တစ်ခု။ ဒါကြောင့်အချိန်မရွေးတစ်ခုခု ဤကဲ့သို့သောလူသည်ငါနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်၌ ၁၀၀% သိသည်မှာသေချာသည် အဲဒီမှာဒါ dope ရှိခဲ့သည်နားထောင်, သင်တို့ကိုငါအချို့သောစည်းချက်စေချင်သောစိတ်ခံစားချက်ထဲမှာငါ့ကိုတယ် လူ ချက်ပြုတ်ကြကုန်အံ့။ သေချာသည်။ တစ်ခုခုလုပ်ကြရအောင် လုပ်လိုက်ကြရအောင်။
Zaytoven &amp; Quavo တို့သည်ခြေထောက်™ပြိုင်ပွဲအားဖြင့် Genius x Fruit ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူစတူဒီယိုကိုနှိပ်ပါ။
< start="1.32" dur="3.18"> Yo ဘာဖြစ်တာလဲ Zaytoven ပါ။ Fruit By ရဲ့အနိုင်ရသူနဲ့တွေ့ဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာပါ >
< start="4.5" dur="3.87"> အဆိုပါ Foot နှင့် Genius စတူဒီယို Sessions ပြိုင်ပွဲ။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှထုတ်လုပ်သူများ >
< start="8.37" dur="5.25"> အဆိုပါခြေဖြင့်ရေစာများအားဖြင့်အသီးအားဖြင့်မှုတ်သွင်းအသံကိုအသုံးပြု။ စည်းချက်တင်ပြခဲ့သည်။ သွားကြရအောင် >
< start="13.62" dur="1.54"> စုံစမ်းသည်။ >
< start="25.14" dur="2"> Masta Pharaoh ။ လူဘယ်လိုနေသလဲ >
< start="30.74" dur="3.9"> ငါ Denver မှကိုလိုရာဒိုမှဖြစ်ပြီးမွေးဖွားကြီးပြင်းသည်။ ဂီတမြင်ကွင်းကဘာလဲ Denver မှာ? ယင်း >
< start="34.649" dur="4.441"> တော်တော်လေးသေးငယ်တယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုအများကြီးကျိန်းသေရှိတယ်။ ဒီတော့ဘာကြောင့်ဝင်ခဲ့တာလဲ >
< start="39.09" dur="5.1"> အဆိုပါ Foot စတူဒီယို Sessions အားဖြင့်အသီး။ ငါစည်းချက်ပြီးသားလုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ငါသာဒါကိုခံစားရတယ် >
< start="44.19" dur="3.15"> နင်မသိဘူးဆိုရင်မင်းကိုထိန်းထားပေးမယ် >
< start="47.34" dur="4.14"> အခွင့်အလမ်းများ။ အထက်တန်းကျောင်းတက်နေစဉ်တွင်သင်သူငယ်ချင်းများနှင့်အရာအားလုံးရရှိခဲ့သည် >
< start="51.48" dur="3.719"> သူတို့ကဂီတကိုလုပ်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့လည်းတူတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ >
< start="55.199" dur="5.25"> သငျသညျထုတ်လုပ်ရန်မှတက်ကြည့်ရှုယောက်ျားတွေ၏? ငါဒေါက်တာ Dre သင်နံပါတ်တစ်ဖြစ်ကောင်းပြောနိုင်ပါတယ် >
< start="60.449" dur="7.831"> ဒါပေါ့။ မဟုတ်ပါ၊ မလုပ်ပါနှင့်၊ ဒါဖွင့်ပါတယ် Pharrell ။ ငါပြောတယ် >
< start="68.28" dur="4.17"> Dre နှင့် Timbaland နှင့်အခြားအရာများသည်ကျွန်ုပ်နားထောင်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ Dre Dre နေ့ငါ >
< start="72.45" dur="3.989"> Walkman မှာသူပြောနေတဲ့ငါ့ရဲ့ဝမ်းကွဲကိုသူသတိပေးလိုက်တယ်။ >
< start="76.439" dur="4.11"> ငါကအသံ၏အကြောင်းရင်းရုံနားထောင်ခြင်းမှအရမ်းစွဲလမ်းခဲ့သည် >
< start="80.549" dur="3.36"> နှင့်ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်ငါဒေါက်တာ Dre ကငါ့မျက်နှာသာကိုရပြီလို့ပြောနေတာကြောင့်ငါပါ >
< start="83.909" dur="2.151"> ငါရက်ပ်ဂီတငါ့မိတ်ဆက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ >
< start="97.04" dur="2.759"> ဒီတော့ဘာစတင်ခဲ့တာလဲ ကောင်းပြီငါပဲအားလုံးကွင်းကိုဖြတ်သန်းသွားနှင့် >
< start="99.8" dur="3.36"> အရာအားလုံးပြီးတော့ပြီးတော့ငါတကယ်ကြိုက်တဲ့ဒီတွေ့ရှိခဲ့: အရသာရောနှော >
< start="103.16" dur="1.08"> ကွင်းဆက်။ >
< start="112.66" dur="2.26"> အဆိုပါရုတ်တရက်နှင့်သူကပဲငါ့ကိုမှခေါင်းညိတ်တယ်။ >
< start="114.92" dur="3.34"> ထိုအခါငါတက်ဆောက်ငါတူညီသော tempo နှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုစောင့်ရှောက်။ အိုကေ >
< start="122.2" dur="4.92"> ငါအဲဒီမှာကနေတည်ဆောက်ခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ အချို့သောလက်ခုပ်သံများနှင့်ထောင်ချောက်များနှင့်အရာအားလုံးပစ်ချ၏။ >
< start="133.52" dur="3.719"> ဒီတော့ဒါရွေ့လျားနေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ငါအဲဒီမှာ ဦး ထုပ်တွေချလိုက်တယ်၊ မင်းကကန်ကန်တယ်၊ >
< start="137.24" dur="1.32"> အရာအားလုံး။ >
< start="144.62" dur="2.759"> ဒါကြောင့်သင်ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီပုံပြင်တွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင့်အတွက်ရုပ်ပုံကိုခြယ်သထားသလိုအဆင်ပြေပါတယ် >
< start="147.379" dur="3.06"> တော်တော်များများပြီးပြီရိုက်နှက်။ yeah ကငါ့အဘို့အခါတိုင်းလုပ်ပါ။ ဟုတ်တယ် >
< start="150.439" dur="3.33"> သူတို့ကိုသူတို့ထောင်ချောက်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါ၊ >
< start="153.769" dur="3.741"> ဒါအခု။ ဒီနေရာကငါသိတဲ့အတိုင်းငါထင်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့ >
< start="157.51" dur="4.42"> လူတိုင်းကအသံတစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးကြလိမ့်မယ်။ ငါရိုက်တဲ့ခလုတ်တွေကိုလုပ်ချင်တယ် >
< start="161.93" dur="6.01"> သငျသညျတစျ ဦး လမ်းကြောင်းထဲမှာသုံးသီချင်းတွေကိုသိလို။ တစ်ခုမှာ ဒါကြောင့်ငါကပြောင်းလဲပစ်ရန်ငါသိ, သင်သိ, ငါ >
< start="167.96" dur="3"> Berry Tie Dye ကွင်းဆက်ဖြင့်သွားခဲ့သည်။ >
< start="178.52" dur="2"> ငါသိသောစည်းချက်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ငါလုပ်ပေးလိုက်သည်ကိုသင်သိသည် >
< start="180.52" dur="3.2"> ခဲ့ငါသည်လည်းတက်ဆောက်။ ဟုတ်တယ် >
< start="189.04" dur="4.5"> ဒြပ်စင်တွေအများကြီးမပြောင်းချင်ဘူး ဒါကြောင့်ငါဗုံသို့မဟုတ် 808 အဘယ်သူအားမျှမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးသို့မဟုတ်ငါပဲထား, တူသော nothin >
< start="193.54" dur="3.62"> အတူတူနှင့်အတူရှိထဲမှာ။ တူညီတဲ့ဗုံ yeah ။ >
< start="204.86" dur="4.34"> ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခု။ ဒါဟာ Masta Pharaoh တံဆိပ်မပါပဲ Masta ဖာရောကရိုက်နှက်တာမဟုတ်ဘူး။ >
< start="209.2" dur="1.42"> သင် tag ကိုသွင်းရမည်။ >
< start="213.1" dur="5.22"> မာတာကဘယ်သူလဲ သင်ဘယ်လိုတက်လာသလဲ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကတော့နောက်ဆုံးနဂါးဖြစ်သည်။ >
< start="218.329" dur="3.181"> ငါလွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်ကနောက်ဆုံးနဂါးကိုကြည့် Iwas သွားတရားဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ဒါ >
< start="221.51" dur="3.87"> ဘယ်သူလဲမာစတာ ဟုတ်ပါတယ် ဒါတော်တော်များများ။ ပြပါ >
< start="233.7" dur="3.899"> ငါအခုသေချာပေါက်ဒီစည်းချက်ထွက်စစ်ဆေးချင်ထင်သူတစ် ဦး ဦး တယ်။ ငါက >
< start="237.6" dur="1.44"> ငါ၏အ Bros တစ် ဦး ကိုခေါ်ပါ >
< start="242.34" dur="3.16"> Huncho ကဘာလဲ? ဘာဖြစ်နေတာလဲ? သင်ဘယ်နေရာမှာလဲ? >
< start="245.5" dur="2"> ကျွန်တော်စတူဒီယိုထဲမှာပါ မင်းသိတဲ့လူ၊ ငါကငါဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာရှိနေတယ်။ >
< start="248.04" dur="3.92"> အိုကေ, ငါနိုင်သူလူ, Masta ဖာရောနှင့်ဒီမှာထိုင်နေသည်။ လူကဘာလဲ? ဘာလဲအစ်ကို? >
< start="251.96" dur="2"> အဘယ်အရာကိုစီးတံတား? သူခက်သွားတယ် >
< start="253.96" dur="3.76"> သင်ယခုခွေးကြီးတွေနှင့်အတူ။ လူကိုတန်ဖိုးထားပါ။ >
< start="259.02" dur="3.7"> အဘယ်သူမျှမကသူပဲဒီစည်းချက်လုပ်, သင်တို့ကိုငါကထွက်စစ်ဆေးချင်တယ်။ တကယ်တော့ကိစ္စကမင်းကိုရက်ပ်လုပ်တဲ့အရာလိုပဲ။ >
< start="262.72" dur="3.24"> ငါစတူဒီယိုထဲမှာကစားနေတယ်၊ ​​ငါနဲ့ကစားမနေပါနဲ့ အရမ်းခက်မယ်ဆိုရင် >
< start="282.22" dur="7.58"> ကျိန်းသေအရူးသွား။ မခက်ဘူး ထိုအရာသည်ယဉ်ကျေးမှု (၃) ဖြစ်နိုင်သည်။ >
< start="292" dur="2.98"> ငါတို့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါကအတူတူထားမယ့်။ >
< start="294.98" dur="4.44"> ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ အစစ်အမှန်အဘို့အ The Foot စတူဒီယို Sessions အားဖြင့်အသီးအနိုင်ရအပေါ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ >
< start="299.42" dur="3.74"> အဲဒါကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပါ။ ခွေးကြီးတွေနဲ့အတူနေတယ် ဆက်လုပ်ပါ။ >
< start="303.16" dur="3.8"> အာရုံစိုက်ပါ။ ချက်ပြုတ်ထားပါ။ မင်းလမ်း >
< start="307.88" dur="4.14"> Ight Quay အရူးတောင်မှအစစ်အမှန်မခံစားရဘူး >
< start="318.4" dur="3.28"> ထုတ်လုပ်သူလုပ်ငန်းသည်သက်တမ်းရှည်စွာရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းကားအဘယ်နည်း။ အဖြစ် >
< start="321.82" dur="4.71"> ထုတ်လုပ်သူမှထူးခြားသောအစွမ်းထက်သောအသံသည်အသက်ရှည်ခြင်းကိုဖန်တီးပေးသည်။ >
< start="326.53" dur="4.11"> သင်သည်ဤအခန်း၊ ထုတ်လုပ်သူ ၁၀ ယောက်ကိုဤအခန်း၌စုစည်းပြီးသင်၏မျက်စိကိုပိတ်နိုင်သည် >
< start="330.64" dur="4.35"> နှင့်ဤကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အတွက်စည်းချက်မှုစတင်သည်။ သူတို့က >
< start="334.99" dur="3.87"> သင်ချက်ချင်း Zaytoven ရဲ့စည်းချက်လူကိုပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ် Zaytoven စည်းချက်များဖြစ်ကြသည်။ >
< start="338.86" dur="3.09"> လူတွေကမေးတယ်။ Zaytoven ငါဘာလုပ်ရမလဲ >
< start="341.95" dur="4.14"> ဂိမ်းထဲမှာကစားဖို့လား ငါလုပ်ရမယ့်အဆင့်တွေကဘာလဲဆိုတာမင်းသိတယ် >
< start="346.09" dur="3.57"> မင်းအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဖို့လိုတယ် Gucci ပေါက်ကွဲမှုအတွက်မဟုတ်ခဲ့ရင် Zaytoven >
< start="349.66" dur="4.65"> ဖြစ်ကောင်းဘာမျှမဆိုလိုဘူးသောအသံ။ သငျသညျတစျခုအနုပညာရှင်ရတစ်ချိန်ကဒီတော့ >
< start="354.31" dur="4.23"> မင်းငါ့ကိုဓာတုဗေဒနဲ့အသံထွက်တယ်၊ မင်းတခါမှုတ်တာ၊ >
< start="358.54" dur="3.33"> ကြောင်းအနုပညာရှင်ချွတ်ယူစတင်သည်။ တောင်မှအဲဒီအနုပညာရှင်လူသိများခံရဖို့သွားနေပါတယ် >
< start="361.87" dur="3.72"> အချို့သောအသံသည်။ ခင်ဗျားဖန်တီးလိုက်တဲ့အသံဖြစ်လိမ့်မယ်။ မင်းကိုဘာကခုန်စေတာလဲ >
< start="365.59" dur="3.54"> ဒီပရောဂျက်သည် The Foot Studio မှပြုလုပ်သောအစီအစဉ်များ? မင်းနဲ့တူငါအမြဲခံစားရတယ် >
< start="369.13" dur="3.539"> ငါသိတယ်မင်းကတခြားထုတ်လုပ်သူတွေကမင်းကိုကြည့်တဲ့ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ် >
< start="372.669" dur="5.671"> တက်ကြည့်လိုက်၊ ငါဟာလမ်းညွှန်ဆရာဖြစ်ချင်တယ်လိုခံစားရတယ်၊ မင်းငါဆိုလိုတာကိုမင်းသိတယ်၊ >
< start="378.34" dur="4.38"> တက်နှင့်လာမည့်ထုတ်လုပ်သူများမှထောက်ခံမှုပြသပါ။ ငါဒီမှာလူလိုပဲငါဟာမင်းကိုသိတဲ့ငါဖြစ်ချင်တယ် >
< start="382.72" dur="4.59"> သင့်ရဲ့ဂိမ်းထဲမှာလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေကိုကြီးမားတဲ့ bro တစ်ခု။ ဒါကြောင့်အချိန်မရွေးတစ်ခုခု >
< start="387.31" dur="3.83"> ဤကဲ့သို့သောလူသည်ငါနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်၌ ၁၀၀% သိသည်မှာသေချာသည် >
< start="391.14" dur="4.22"> အဲဒီမှာဒါ dope ရှိခဲ့သည်နားထောင်, သင်တို့ကိုငါအချို့သောစည်းချက်စေချင်သောစိတ်ခံစားချက်ထဲမှာငါ့ကိုတယ် >
< start="395.36" dur="5.72"> လူ ချက်ပြုတ်ကြကုန်အံ့။ သေချာသည်။ တစ်ခုခုလုပ်ကြရအောင် လုပ်လိုက်ကြရအောင်။ >